यो आफै गर्नुहोस् बगैचा चुली कला इन्द्रिय - घर र बगैचा को लागी विचारहरु
यो आफै गर्नुहोस् बगैचा चुली
22.07.2014 द्वारा पोष्ट गरिएको: कला संवेदना
बाहिर कुना, बगैचा, घर र बगैचाको लागि, यो आफैले गर्नुहोस्
के यो आफ्नै ओभन बनाउन सजिलो छ? अनिवार्य रूपमा, फायरप्लेसहरू र सबै प्रकारका फायरप्लेसहरू बनाउनु भनेको एक शिल्प हो जुनसँग यसको आफ्नो विशिष्ट गोप्यता र विवरणहरू सिकारू मालिकले दिएका छन्। जे होस्, जब यो बन्द दहन कक्षको लागि आउँदछ, चीजहरू सजिलो हुन्छ। बगैंचामा प्रस्तुत विचारको अनुभूति एक प्रयास हो जुन गैर पेशेवरहरूले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। फारम vaults वा खरीद गर्न सकिन्छ। अवश्य पनि, भवन संरचनाहरूको निर्माणको बारेमा ज्ञानको अभावमा, विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन आवश्यक छ। सामग्रीको छनौट पनि राम्रोसँग परामर्श गर्नुपर्छ, तर संक्षेपमा, यो ओभन एक कार्यान्वयन गर्न अपेक्षाकृत सजिलो विचार हो र यसमा तयार गरिएका सबै व्यञ्जनहरूले तपाईंलाई यसको गन्धले मोहित गर्दछ।
जस्तै गार्डन BBQ को लागी हाम्रो प्रस्ताव, धेरै विवरणहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, दहनशील सामग्रीबाट टाढा। यदि तपाईंसँग निर्माणको ठाउँमा स्थिर प्रवाह छ भने, यो उचित छ कि भट्टीको खोल्ने यसको समानान्तर हो, तर यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन।
राम्रो रोजगार योजना सफलताको रहस्य हो। तपाईंले उनीहरूको गर्नुभन्दा पहिले आफ्ना गल्तीहरू देख्दा तपाईंको पैसा र समय बचत हुनेछ। त्यहाँ कुनै पूर्ण र विश्वव्यापी योजना छैन। जब केहि निर्माण गर्नुपर्दा हजारौं विवरणहरू छन् जुन ध्यानमा राख्नु पर्छ। यसैले हामी तपाईंलाई विचार र केही विवरणहरू दिन्छौं, र बाँकीका लागि तपाईंले काम र रचनात्मक सोच राख्नु पर्छ। भट्टीको आकार सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले यसको कार्यक्षमता परिभाषित गर्छन्, अर्थात्। के यो पकाउने वा धूम्रपान हुनेछ।
पहिले हर्थ (G) को व्यास र यसको उचाई (E) निर्धारण गर्नुहोस्। तिनीहरूमा निर्भर गर्दै, समर्थन संरचना (ए, बी, सी, डी) र चिमनी (एफ) को उचाईको बाह्य आयामहरू पनि निर्धारित गरिन्छ। लेयरिंग बिना आयामहरू पनि गणना गर्नुहोस् (a र b), यदि तपाईंले एक पूर्वानुमान गर्नुभयो भने, साथ साथै आवश्यक स्थिरता (c) को प्रकार र सेक्सन र एलिमेन्ट्सको वास्तविक मोटाई (d)। यो वांछनीय छ कि चिम्नीको शरीर भट्टी भन्दा कम्तिमा 50% बढी हुनुपर्दछ, वा यदि उचाई (E) 50 सेमी हो भने, त्यसपछि चिम्नी उच्च (एफ) कम्तिमा 75 सेमी (आधारबाट) हुनुपर्छ। भोल्ट / orifice खोल्ने चौडाई र उचाई (e र f) अधिमानतः यसको उचाई (E) को लगभग 50% हुनु पर्छ। आकार र आकारमा भिन्नताहरू सम्भव छ, किनकि यो मुख्यतया ढोकामा निर्भर गर्दछ, र तिनीहरू मार्फत दहनको नियमन गर्न सकिन्छ। तिनीहरू, अर्कोतर्फ, चिमनी शरीरबाट दहन कक्षलाई पृथक बनाउँदछ, छाप लगाइएको वातावरण सिर्जना गर्दछ।
आधारभूत निर्माण सामग्री चयन गर्नुहोस् र तपाईंलाई आवश्यक मात्राहरूको हिसाब गर्नुहोस्।
निर्माणको यस प्रकारमा, विपरित बगैचा बारबेक्यू, यसलाई पेडेस्टल बनाउनको लागि सुझाव दिइन्छ, किनकि कुल वजन यसको कारण झर्छ वा मोड हुन सक्छ। प्रबलित सुदृढीकरण आधार डालो र कडा गर्न अनुमति दिनुहोस्। यसमा तीन समर्थन भित्ताहरू ब्लकहरू वा ईंटाबाट बनाउनुहोस्, फारमवर्क राख्नुहोस् र दोस्रो प्रबलित स्ल्याब खन्याउनुहोस्। यो सुकिसकेपछि, भविष्यको फर्नेसको लागि आधार बनाउनुहोस्, मिलाउनुहोस्, र फिक्स गर्नुहोस्। गर्मी प्रतिरोधी ईंटहरू प्रयोग गर्नुहोस्। प्वालको लागि कोठा छोड्दै, उनीहरूको वरिपरि ठोस एकल इट्टाको आधा अंशको घेरा बनाउनुहोस्। तिनीहरूमा, अर्को पows्क्तिहरूमा कोण (गोलाकार आकार प्राप्त गर्न)। यो सुझाव दिइन्छ, जब तपाईं दोस्रो वा तेस्रो प row्क्तिमा पुग्नुहुन्छ, खोल्दा कमान आकार गर्न। यो प्राय: चयन गरिएको ढोका वा ढोकामा निर्भर गर्दछ। गोलाकार क्षेत्रको आकार र चापको साथ मोटो कार्डबोर्ड वा स्टाइरोफोम टेम्प्लेटहरू पनि तयार गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईं तिनिहरु फारम भित्र छोड्न को लागी मार्गदर्शन गर्न को लागी जब तपाइँ घर बनाउँछ समर्थन गर्दछ। बिस्तारै र विधिवत काम गर्नुहोस्; प्रत्येक तत्व कडा गर्न पर्याप्त समय छोड्नुहोस्। जब तपाईं भट्टी समाप्त हुन्छ र मिक्सहरू कडा हुन्छन्, तपाईं यी बान्कीहरू भ break्ग गर्न र प्वाल मार्फत तान्न सक्नुहुनेछ। 1 /2को बारे मा गोलार्ध बाहिर को चौडाई बाट चिमनी को लागी छोड्दै प्वाल को आर्क हटाउनुहोस्। यो यस्तो स्थितिमा हुनुपर्दछ कि जब खोल्ने बन्द हुन्छ, दहन कक्ष अक्सिजनमा पहुँच योग्य हुँदैन। प्राय: बाहिरी, थप इन्सुलेशन तह वाडिंग, ढु stones्गा, माटो र यहाँसम्म कि कलात्मक सजावट शीशा मोजेक वा टेराकोटा टाईलहरू प्राय: प्रदान गरिन्छ। जब सबै तयार हुन्छन्, करीव एक हप्ताको लागि पूर्ण रूपमा सुक्नुहोस् र तपाईंको ओभनलाई प्रकाश दिनुहोस्।
बगैचा, बगैचा पिज्जा भट्टी, चिनाई भट्टी, आँगन मा एक चूल्हा, विचारहरु, बगैचा को लागी विचारहरु, यार्ड को लागी विचारहरु, घर को लागी विचारहरु, घर को लागी विचारहरु, भट्टी को विचार, चिमनी, चल्ती बनाउनुहोस्, आफैलाई भट्टी बनाउनुहोस्, यो आफै गर्नुहोस्, चिमनीको साथ चिमनी, भट्टी, बगैचामा ओभन, पछाडि भट्टी, पिज्जा ओभन, ईंट भट्टी, चिमनी स्टोभ, घर को लागी विचारहरु, आन्तरिक डिजाइन, फर्नीचर, आन्तरिक विचारहरू, डिजाइन विचारहरु, आधुनिक घर, सजावट विचारहरु, कलात्मक विचारहरू
कोमल, रोमान्टिक र आकर्षक! एक साधारण तुफान सजावट को लागी एक बिल्कुल सजिलो र सस्तो तरीका ...
हामी तपाइँलाई डिकूपेज टेक्निकको धेरै राम्रो र सजिलो संस्करण प्रयोग गर्दछौं जुन प्रयोग गरिएको छ ...
ह्याम र अण्डाको साथ छिटो, सजिलो र स्वादिष्ट नास्ता
हेम, चीज र अण्डाको साथ स्वादिष्ट डबल टोस्ट तयार गर्ने यो सजिलो तरिका हो। तपाईंसँग ...
बगैचामा सजावट र सजावट
यार्ड र बगैचाको लागि चार प्रेरणादायक विचारहरू। यहाँ छन् कसरी तपाईं सुन्दर ठाउँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ...
यहाँ केहि वैकल्पिक क्रिसमस ट्री सुझावहरू छन्। सबैबाट फाइदा लिन सक्दछ ...
नदी ढु stones्गा संग घर सजावट
नदी पत्थर सुन्दर प्राकृतिक सामग्री हो जुन सफलतापूर्वक एक भित्रीमा बुनेको हुन सक्छ ...
पुरानो विन्डोबाट फोटो फ्रेम
होम विन्डोजले हामीलाई वरपरको संसार हेर्न अनुमति दिन्छ, र परिवार फोटोहरूले हामीलाई अनुमति दिन्छ ...
ढु stone्गा, काठ, धातु र गिलासको सुन्दर क्युबिस्ट आधुनिक घरहरू
क्युबिस्ट वास्तुकला धेरै व्यक्तिहरू मनपर्दछन् जसले सुन्दर र आधुनिक घर चाहान्छन् ...
अभिलेख खोज्नुहोस् - महिना चयन गर्नुहोस् - जुलाई 2020 जुन 2020 मई 2020 अप्रिल 2020 मार्च 2020 फेब्रुअरी 2020 जनवरी 2020 डिसेम्बर 2019 नोभेम्बर 2019 अक्टोबर 2019 सेप्टेम्बर 2019 अगस्ट 2019 जुलाई 2019 जुन 2019 मई 2019 अप्रिल 2019 मार्च 2019 फेब्रुअरी 2019 जनवरी 2019 डिसेम्बर 2018 अक्टोबर 2018 सेप्टेम्बर 2018 अगस्ट 2018 जुलाई 2018 जुन 2018 मई 2018 अप्रिल 2018 मार्च 2018 फेब्रुअरी 2018 जनवरी 2018 डिसेम्बर 2017 नोभेम्बर 2017 अक्टोबर 2017 सेप्टेम्बर 2017 अगस्ट 2017 जुलाई 2017 जुन 2017 मई 2017 अप्रिल 2017 मार्च 2017 नोभेम्बर 2016 जुलाई 2016 जुन 2016 मई 2016 अप्रिल 2016 मार्च 2016 जनवरी 2016 डिसेम्बर 2015 नोभेम्बर 2015 अक्टोबर 2015 सेप्टेम्बर 2015 अगस्ट 2015 जुलाई 2015 जुन 2015 मई 2015 अप्रिल 2015 मार्च 2015 फेब्रुअरी 2015 जनवरी 2015 डिसेम्बर 2014 नोभेम्बर 2014 अक्टोबर 2014 सेप्टेम्बर 2014 अगस्ट 2014 जुलाई 2014 जुन 2014 मई 2014 अप्रिल 2014 मार्च 2014 फेब्रुअरी 2014 जनवरी 2014 डिसेम्बर 2013 नोभेम्बर 2013 अक्टोबर 2013 सेप्टेम्बर 2013 अगस्ट 2013 जुन 2013 मई 2013 अप्रिल 2013 मार्च 2013 फेब्रुअरी 2013 जनवरी 2013 डिसेम्बर 2012 नोभेम्बर 2012 अक्टोबर 2012 सेप्टेम्बर 2012 अगस्ट 2012 जुलाई 2012 जुन 2012 मई 2012 अप्रिल 2012 मार्च 2012